Maalinta: Febraayo 13, 2018
Mashruuca Kanal Istanbul ayaa laga wada hadlay sannado badan faallo badanna laga bixiyay. Kanal Istanbul waxaa loo soo bandhigay Istaraatiijiyada mashruuca Crazy ee taraafikada ah ee 2011 Haliç Erdoğan, ra'iisul wasaaraha muddadaas. ugaarsadaha, [More ...]
Guddoomiyaha Adana Mahmut Demirtas, Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Adana-Toprakkale ee ku yaal xadka saldhigyada Yenice-Adana-Ceyhan inta u dhaxaysa daraasadda dhismaha 2-da iyo dayactirka khadka jira ee la baarey. Demirtaş wuxuu fadhiyey kursiga darawalka; Faallooyinka maqaayadaha Yenice, Adana [More ...]
TÜLOMSAŞ waxay ku shaqaysay shaqaale joogta ah
Qandaraasluhu Disabled Shaqaalaha Joogtada Reception sameynayo, iyada oo xayeysiis State Shaqaalaha Madaxtooyada, Turkey tareenka iyo Engine Warshadaha ayaa la daabacay ka dhigi doonaa qorista ee Corporation naafada ah. Turkey tareenka iyo dhajiyay in su'aasha [More ...]
Mashruuca Infrastructure Project ee Mashruuca YHT ee Yerkoy-Kayseri ayaa la qaban doonaa
Mashruuca Kaabayaasha Mashruuca kaabayaasha Mashruuca ee Yerköy-Kayseri ayaa la qaban doonaa TC STATE RAILWAYS GUUD EE DIRECTORATE Jerköy-Kayseri Mashruuca Kaabayaasha Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Dhismooyinka, 4734 Nr. [More ...]
ERDEF Xubno ka yimid Erzincan oo leh Eastern Express
100 ee xoreynta Erzincan ee gumaysiga. Selahattin Ayvaz, Madaxweynaha ERDEF (Xiriirka Ururada Erzincan) iyo xubnaha aasaaska ayaa u yimid Erzincan iyadoo ay la socdaan Eastern Express si ay uga qeyb galaan munaasabadaha Kurtuluş. Selahattin Ayvaz, madaxweynaha ERDEF iyo ururka [More ...]
Hüseyin Sözlü, Duqa Magaalada Adana Metropolitan Dowlada, wuxuu martigeliyay hooyadiis iyo qoyskiisa oo ay aflagaadeeyeen darawalka basaska gaarka loo leeyahay ee Adana shalay .. Isagoo ka hadlaayay booqashada qoyska, Madaxweynaha Hüseyin Sözlü wuxuu Adana kula kulmay Adana. [More ...]
Ra'iisul Wasaaraha ayaa siin doona Ra'iisul Wasaaraha Ra'iisul Wasaaraha Railway
Raiisel wasaare Yildirim ayaa la rajaynayaa inuu ku dhawaaqo qandaraaska wadada tareenka ee magaalada Erzincan maanta ayaa la qaban doonaa shirweynaha caadiga ah ee xisbiga AK Party Erzincan 6. Gudoomiyaha Gobolka AK Party ee Erzincan Mehmet Cavit Sireci ayaa sheegay in shirwaynihii ra’iisal wasaare Binali [More ...]
Wadamada Yurub, oo si joogto ah u mamnuuco gawaarida naaftada ah oo soo saaray jadwalka taariikhda, ayaa sidoo kale la wareegay warshadaha tareenka. Sanadkii 2040, Boqortooyada Midowday (UK) waxay ku dhawaaqday in tareenka naaftada naafeeysan doono. Wadamada Midowga Yurub ee gawaarida naaftada ah [More ...]
Mashruuca 11 Mashruuca Xadka ee Malatyada
5. The Republic of Turkey State Tareennada TCDD Regional Agaasinka Malatya by shaqada ee xarunta iyo mashruuca isgoyska 11 heerka at dhibcood kala duwan ee gobolka sii. Wadarta qiimaha lagu qiyaasay daahfurka 85 milyan [More ...]
TÜVASAŞ (Turkey baabuur Industry) goobta iyada oo TEO si loo xaliyo la'aanta ah ee shaqaalaha ee shaqaalaha ma tirin sida dhaawac ama naafo Maxaabiis hore ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Waa tan faahfaahinta. [More ...]
Kuala Lumpur -Singapore Heshiiska Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare
George Kent (Malaysia) Bhd wuxuu heshiis la galay afar shirkadood oo reer Yurub ah mashruuca Kuala Lumpur -Singapore High Speed ​​Train (HSR). Shirkadda dhismaha iyo kaabayaasha ee Austaralia PORR iyo George Kent ayaa si wada jir ah u yiri; [More ...]
Tareenada loo yaqaan 'Ars Trains' waxay ku shaqeeyaan boqolkiiba boqol awoodda. Waxaan rajeynayaa in tiradan ay badato oo martigelintaan si wanaagsan ayaan ula soo dhoweyn doonaa. ” Arslan, Saldhigga Tareenka ee Kars [More ...]